Ngwa - Akuko Ngwa | Akụrụngwa Akụkọ (Peeji nke 2)
Ọ bụ ihe a na-ahụkarị ịchọta ibe a ma ọ bụ na-enweghị ọrụ, anyị ga-atụle okwu a ma nyochaa ụfọdụ ndị ọzọ.
Oge okpomọkụ na-abịa yana ya na njem. Nsogbu bụ mgbe anyị nọ n'oge a na-achịkọta ihe niile ...
Ọ bụrụ na ị na-achọ ekweisi mkpọtụ-na-akagbu ekweisi, ọ ga-abụ na Apollo Bold si Tronsmart ga-amasị gị.
Anyị nwere Amzon Fire 8 HD ọhụrụ n'aka anyị, nke dị ọnụ ala, ọhụrụ mbadamba nwere ọtụtụ ihe ị ga-enye maka obere ego.
Honor emeela ihe ngosi iji melite katalọgụ ya, oge a gafere smartphones ma ọ bụ ihe eji ejiji. Nkọwa niile.
Onye Asia na-asọpụrụ Honor gosipụtara ngwaahịa ọhụrụ ya maka mba anyị. Nke a bụ ọnụahịa ha na njirimara ha.
Anyị ga-amatakwu ihe omimi Huawei P40 Lite E ọhụrụ, ọ ga-enwe ike ịnye igwefoto dị mma yana ọnụahịa dị n'okpuru euro 200?
Nyochaa nke SmartMike + site na Sabinetek
SmartMike + bụ igwe okwu ikuku nke Sabinetek nwere Bluetooth 5.0, teknụzụ TWS na ogo ọkachamara nwere oke nchekwa USB
Igwefoto ụlọ nke Yi Yi Yi, akụrụngwa zuru oke maka onyunyo vidiyo, yana njikọ Wi-Fi, ngwa pụrụ iche na ụda bi-directional
Oriri nke akwukwo na akwukwo odi n’ime izu uka gara aga arịgogogoro, site na data nke Kobo nyere n’aka Fnac
Ọ bụrụ na anyị nwere Mbadamba ụrọ ma ọ bụ Smartphone, anyị nwere ike iji ohere ịntanetị were budata ọtụtụ puku utu aha efu. Lee, anyị ga-egosi gị.
Obere ihe karịrị otu ọnwa gara aga, Huawei kwupụtara na na Machị 26 ọ ga-eweta na Europe na ọkwa ọhụrụ ...
A awa ole na ole tupu ememme nke 10 ncheta nke Aliexpress, Tronsmart ọnọde ya atọ kasị adọrọ mmasị na-enye iji sonyere ndị ọzọ.
Taa, anyị na-eweta otu n'ime ngwa Xiaomi kachasị mma n'oge a, okpu na-ekwe nkwa ịkwụsị ntutu isi ma wusi mgbọrọgwụ ike.
Taa na Actualidad Gadget anyị na - ekwu maka ngwa ahịa ebidobeghị ire ere. Ọ bụla…
Aro na-enye onye anyị na onpo Day na ndị kasị adọrọ mmasị na bara uru Ngwa na ahịa.
Nke a bụ nwoke Satisfayer
Na-eju ndị mmadụ afọ ojuju, nwoke na nwanyị ji egwuri egwu bụ maka ire ere ma kwe nkwa ahụmịhe pụrụ iche ma na-enye obi ụtọ.
Taa, anyị na-ekwughachi gbasara ekweisi ikuku nke TWS. N'oge a n'aka otu ụlọ ọrụ ama ama ha batara ...
Apple na-agbakwunye ọtụtụ okwu na katalọgụ nke ngwa maka AirPods Pro, igwe ekweisi ikuku ọhụụ
Anyị enweela ike ịnwale Hohem gimbal, ngwa ejiji maka ndị chọrọ ịwụli elu na vidiyo emere na smartphones
Inye smartwatch bụ nhọrọ magburu onwe ya iji tụlee Christmas a ma ọ bụrụ na ị maghị ihe ị ga-azụ.
N’okpuru anyị gosipụtara gị ọla aka ise mara mma kachasị mma anyị nwere ike ịzụta ugbu a n’ahịa.
SwellPro na-agba Black Friday site na ịnye anyị 10% ego na drones niile na ngwa ya n'ịntanetị. Bilie ego ebe a.
Sọpụrụ na-egosi Ime Anwansi 2
Honor ewepụtala ụdị ọhụụ nke smartwatch ya. Anyị amatawo Honor Watch Magic 2 nke na-abịarute ...
Energy Sistem ESG 5 Shock, ekweisi egwuregwu na ogo kacha mma / ọnụahịa na ahịa, ike, ogo na teknụzụ ịma jijiji.
Anyị anwalela ekweisi Arbily G9 wireless maka ụbọchị ole na ole. Ike, ụda dị mma, imepụta mara mma na ego mbelata ego akwadoro pụrụ iche.
Chọpụta nyocha a zuru oke nke Huawei Watch GT 2, smartwatch ọhụrụ nke akara ndị China nke emegororị maka ọkwa ya na Spain.
Chọpụta ihe niile gbasara SMOOTH-Q2, Zimyun gimbal nke pụtara maka obere obere ya na ịdị mfe iji ya, ezigbo maka ama gị.
Chọpụta ọnụọgụ ọhụrụ nke chaja AUKEY nke nwere teknụzụ Dynamic Detect iji jiri ngwa ngwa na ekwentị gị ma ọ bụ laptọọpụ gị.
Choputa ihe nile banyere Huawei Watch GT 2, nke ohuru ohuru a gosiputara na ihe omume na Germany.
Na mgbakwunye na iPhone 11, ụmụ okorobịa si Cupertino egosikwala mmeghari ohuru nke iPad 2018 na Apple Watch Series 4. Anyị na-egosi gị akụkọ niile ha na-enye anyị.
Choputa ohuru nke smartwatch na Wear OS nke Fosil gosiputara na IFA 2019 n'izu a na Berlin.
You chọrọ imeghe ụgbọala ahụ na ekwentị gị? Chọpụta ihe banyere Parkingdoor, sistemụ na - enye gị ohere iji ekwentị gị aka igodo. 30% koodu ego
Chọpụta ngwaahịa niile nke Fresh ´n Rebel gosipụtara na IFA 2019 yana na anyị nwere ike ịzụta na ụlọ ahịa.
Chọpụta ihe banyere mwepụta nke Huawei FreeBuds 3 ọhụrụ a nke egosiri na IFA 2019.
Sonos Bugharịa: Sonos okwu izizi nke ụwa n'èzí na-ekwu okwu Sonos. Choputa ihe nile banyere onye okwu Sonos a nke enyere n’ihu IFA 2019.
Puma Smartwatch: Akara si smartwatch na Wear OS. Chọpụta ihe banyere mmalite nke elekere a na IFA 2019.
Kobo Libra H2O, ngwaọrụ ọhụrụ nke ezinụlọ Kobo nwere ihu igwe na-agba agba nke anụ ọhịa nke na-azọpụtakwa bọtịnụ anụ ahụ.
Chọpụta ihe niile gbasara Galaxy Watch Active2 Under Armor Edition, ụdị pụrụ iche nke elekere Samsung nke enyerelarịrị n'ihu ọha.
Chọpụta ihe niile gbasara Galaxy Watch na-arụ ọrụ 2, ọhụụ Samsung ọhụụ, nke ewebatalarị n'ihu eze ma ga-abịa n'oge na-adịghị anya.
Chọpụta ihe banyere ọhụụ ọhụụ Fosil na-ekiri nke na-eji Wear OS dị ka sistemụ arụmọrụ yana egosipụtakwala n'ihu ọha.
Logitech Craft, keyboard nhọrọ nke nwere ihe ọ bụla ọ ga - abụ ka ọ bụrụ keyboard kacha mma mgbe ọ bịara ọrụ.
Anyị nyochaa SPC Visum, nwere ọgụgụ isi vidiyo nke emebere ka ị nwee ike mezue ngwa ngwa ụlọ nke ụlọ gị n'ụzọ zuru ezu, mara anyị na ya.
Emeputa Scuf Gaming gosipụtara nzọ ọhụrụ ya maka njikwa ganing na-eweta Scuf Prestige.
Anyị nwere Eureka, ngwa Cellularline nke ị nwere ike ịchọta ihe ọ bụla furu efu na ekwentị gị.
The Energy Sistem Smart Ọkà okwu 5 smart ọkà okwu na-ewetara gị ihe niile Alexa nwere ike inye na n'ụdị mara mma na nke oge a
Ọ bụrụ na ịmabeghị ụdị Kindle ị chọrọ, n'isiokwu a anyị na-egosi gị nke bụ ụdị kachasị mma dabere na mkpa gị
Anyị na-ewetara gị nyocha nke Amazon Echo Show, na nnukwu ihuenyo Amazon nke na-abịa inye nnukwu ụda na Alexa na ọnụahịa dị.
Chọpụta ihe niile Samsung Galaxy Fit, ihe ọhụrụ nwere nke Samsung Galaxy nso, nwere ike ịnye na nsụgharị ya abụọ
Samsung Galaxy Buds abatala, na-atụle nkọwa ha anyị nwere ike ikwu maka ekweisi ikuku kachasị zuru oke ma sie ike na ahịa.
Chọpụta nkọwa zuru ezu nke Samsung Galaxy Watch nọ n'ọrụ, smartwatch ọhụrụ sitere na akara Korea gosipụtara n'ihu ọha.
Nyocha nke Xiaomi M365 Mijia skuta. Chọpụta njirimara ya, uru ya, ọghọm ya na ebe izu ya ọnụ ala. Ọ bara uru?
Na mbata nke oyi, ụdị ọhụrụ nke uwe aka sitere na ụlọ ọrụ Mujjo pụtara
Mgbe oge oyi rutere, ụdị ọgbara ọhụrụ ndị a sitere na ụlọ ọrụ Mujjo pụtara na ha ga-eji ngwaọrụ mmetụ anyị aka na-enweghị oyi
Choputa ThiEYE Dr.X RC, minidrone nke naanị € 70 na-enye anyị ụgbọ elu nke mbụ na ezigbo foto na vidiyo. Want chọrọ ịmatakwu?
Anyị nwalere ọhụrụ Amazon Echo Plus, onye na-ekwu okwu kachasị elu site na ụmụ nwoke si Jeff Bezos. Mma dị mma ma dakọtara na ụlọ anyị nwere ọgụgụ isi.
Anyị nwalere ihe ọhụrụ Amazon Echo Dot, nhọrọ kachasị mma maka onye ọ bụla chọrọ onye enyemaka na-enweghị ihe ọ bụla na-enweghị iwe nnukwu ego.
Taa bụ mmalite nke Sonos dum maka ndị hụrụ egwu na Japan, ahịa egwu egwu kachasị ukwuu n'ụwa.
Ọ bụrụ na ịmabeghị ihe na ihe smartwatch bụ maka, n'isiokwu a anyị ga-akọwa ihe niile metụtara ngwaọrụ ndị a.
Teslọ ọrụ Tesla, nke Elon Musk bụ nke kachasị mkpa, na mgbe ụfọdụ esemokwu, na-arara ...
Mgbịrịgba ọnụ ụzọ vidiyo na igwefoto nche dị ugbu a na Spain
Maka ndị niile na-amaghị, Ring, bụ ụlọ ọrụ nke kachasị raara nye nyocha ụlọ ...
Ngwa na mkpuchi maka AirPods enwere ọtụtụ na ahịa na nke a bụ ihe ọzọ na-agbakwunye na ...
Ma ọ bụ na Roland Quandt, na-ahụ maka nzacha ihe oyiyi nke ga-abụ chaja wireless nke abụọ maka ...
Ihe ngosi nke ohuru Samsung Galaxy Note 9 di ezigbo nso na ohuru ohuru banyere ihe ngosi a adighi ...
Emere ihe niile ka ọ dị ma ọ dị ka smartwatches ọhụrụ nke ụlọ ọrụ South Korea ga-ahụ ọkụ na ...
Ọzọ anyị nwere ọkwa Apple atọ metụtara metụtara arụ ọrụ na imechi mgbaaka kwa ụbọchị ...
Firmlọ ọrụ Armani, ejikọtara ya na ejiji oge niile, mana n'oge na-adịbeghị anya, yana ịrị elu nke smartwatches, ụlọ ọrụ ahụ chọrọ ịbanye na ụlọ ọrụ ejiji Armani, ewepụtala ọhụụ ọhụụ smartwatch maka ndị hụrụ ụlọ ọrụ na egwuregwu ahụ n'anya N'izugbe.
Taa bụ otu ụbọchị kachasị atụ anya n'afọ, yana Black Friday, ma ọ dịkarịa ala maka ndị debanyere aha ...
Ọgbọ nke abụọ nke HyperX òké, Pulsefire Surge, dị ugbu a na ahịa maka euro 69,99.
Mkparịta ụka kachasị ọhụrụ banyere ụbọchị ngosi ngosi nke Galaxy Note 9 na-egosi na ọ ga-abụ na mbido Ọgọstụ na ọ ga-abịa n'aka na Gear S4
A na-ere PowerWatch X ugbu a, smartwatch mbụ nke dị n'ahịa na-eji ahụ ọkụ anyị dị ka isi iyi ike
watchOS 5 bụ mmelite Apple Watch ọhụrụ nke ga - erute ndị ọrụ niile na - esote Septemba. Anyị na-akọwa mmezi niile agbakwunyere.
Cellularline bụ akara nke na-abanye nwayọ n'ahịa mba, yabụ anyị nyochara ụzọ atọ n'ime ụzọ ọzọ ya na nchekwa na ịkwụ ụgwọ maka iPhone X.
Ngwa ọ bụla, dị mma nke ọma, nke anyị na-achọ ka anyị nwee ike ịnụ ụtọ ọkacha mmasị anyị na kọmputa anyị enweghị otu ọnụahịa ...
Ọ bụ 1o, 3-anụ ọhịa electronic ink dee nke anyị nwere ike ịgụ na ndetu, ike anyị ...
NIU na-enye eScooter eletrik eletrik, ihe N1
N'okwu a, anyị ga-ekwu maka ngosipụta nke skuta igwe na ọgụgụ isi, NIU N1. Nke a skuta ...
Xiaomi bu ulo oru nke otu puku ngwa. O gosila onye ntụgharị okwu na ọgụgụ isi na ọnụ ọchị. Aha ya bụ Xiaomi Konjac AI
Samsung ewebatala kaadị ebe nchekwa ọhụrụ na usoro SD maka ngwa vidiyo vidiyo kpụ ọkụ n'ọnụ. Ha bụ ihe ọhụrụ Samsung PRO Endurance
Ogologo oge gafere kemgbe mmalite nke Xiami Mi Band 2, ụlọ ọrụ ndị China kwere ka ogologo oge gafere n'etiti ...
Dị ka anyị nwere ike ịgụ na La Vanguardia, Amazon gaara ezube ịmalite Amazon Echo na Spain n'ime izu ole na ole.
Smartwatches bịara n'ahịa ahụ maka Pebble kwụsịrị, ụlọ ọrụ na-enweghị ike imeghari na ...
Have nwere egwuregwu PLC ọhụrụ na ahịa. Ọ bụ devolo Multiroom WiFi Kit 550 +. Egwuregwu PLC a ga-enye gị ohere ịnụ ụtọ njikọ dị mma n'ime ụlọ ọ bụla nke ụlọ
Meizu Halo bụ ekweisi Bluetooth kachasị ọhụrụ sitere na ụlọ ọrụ China. Na mgbakwunye, ha kwụpụtara maka ịnye eriri na-egbuke egbuke nke a ga-ahụ n'abalị ma ọ bụrụ na ị na-eme egwuregwu
Iji mee ememme ụbọchị akwụkwọ ahụ, Amazon na-enye anyị Kindle Paperwhite naanị euro 99, na mbelata euro 30 na ọnụego ya.
Thewa eletrik na-ebili dị ka ụfụfụ ma mgbe anyị lere anya gburugburu anyị nwere ike ịhụ ụdị niile ...
EBay Super Weekend na-alaghachi na ọgba aghara na ego nke ihe ruru 60% na ngwaọrụ eletrọniki nke ụdị niile
Onye na-akwado nkwado John Ulmen, wepụrụ obi ya na skateboard ọhụrụ nke ezinụlọ ma ọ bụghị ...
Ndị nrụpụta ọrụ ewetawo GXT 590 Bosi Bluetooth ọhụrụ, njikwa dị maka ngwaọrụ ọ bụla nke gam akporo na Windows jisiri.
Na mba anyị, elekere Fitbit Versa dị ugbu a maka ịzụta yana maka ihe ndị ọzọ ...
N'ihi SPC Alien na SPC Alien Stick, ọ dịghị mkpa ịgbanwe telivishọn ka ị nwee ike ịnụ ụtọ ọrụ ntanetị ebe ọ na-agbakwunye nhọrọ nhọrọ nke Smart TV
Mophie weputara ugwo ikuku ikuku ohuru nke eji ya n’agha n’iru. Nke a bụ Mophie Charge Stream Pad +
Google na agbakwunye akụrụngwa ọhụụ ka ịnụ ụtọ akwụkwọ ọgụgụ gị
Na mbido 2018 Google tinyekwara akwụkwọ ọdịyo na onyinye e-book. Mgbe ọnwa abụọ gachara, ọ na - agbakwunye ọrụ ọhụụ ọhụrụ maka usoro a
Wherebanye ebe anyị ga-enwe ohere ikwu maka ihe niile nwere ike ịnye okpu egwuregwu nke cha cha nke Sharkoon Rush ER2.
Sony ka kwuputara mbelata na ọnụahịa nke PlayStation VR, na ọnụahịa ọhụrụ ya bụ $ 299, mbelata ego nke 25%.
Ntinye ebe anyị ga-enyocha n'ụzọ miri emi ihe niile isi egwuregwu dị ka Sharkoon Shark Zone H40 mara mma nwere ike ịnye.
Nsogbu ndị na-ebilite ma ọ bụrụ na batrị anyị na ụgbọ ala eletrik anyị nwere ike ịnwe ụbọchị ndị a gụrụ na drone a iji kwụọ ụgbọ ala eletrik
Firmlọ ọrụ Taiwanese gosipụtara ọgbọ nke atọ nke ROG Gladius, oke na ntụgharị mgbanwe, mkpebi nke 12.000 DPI, ngwa anya na ọsọ ọsọ nke 250 DPI
Buslọ ọrụ ahụ bụ Nimbus, gosipụtara SSD nke mbụ nwere ikike nke ihe ruru 100 TB nchekwa
Anyị ahụworị ngwa ndị ọzọ sitere na ụlọ ọrụ dodocool ma na nke a anyị na-eweta ekwe ntị na-ege ntị, mmiri na-adịghị, na Igwe okwu ...
Firmlọ ọrụ Logitech ahụ gosipụtara keyboard ọhụrụ na ndị ọkà okwu maka ndị na-egwu egwuregwu, ndị ọkà okwu sitere na usoro Philips Ambilight.
Toshiba na-aga n'ihu ịkụ nzọ na ngalaba azụmahịa. Ihe ohuru ohuru a na akpo Toshiba dynaEdge, nke mejuputara komputa Windows 10 na iko di egwu.
Ekele maka batrị mpụta 19.500 mAh sitere na mophie, anyị nwere ike ịgba ụgwọ laptọọpụ anyị, ma ọ bụ ọbụlagodi MacBook na ngwa ngwa, ụzọ dị mfe na enweghị plọg.
Teknụzụ obibi akwụkwọ 3D na-aga n'ihu n'agbanyeghị eziokwu ahụ na n'oge a enweghị ọtụtụ ọrụ ...
N'ime izu ole na ole, ngwa gam akporo Wear, yana aha sistemụ arụmọrụ nke na-ejikwa ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke smartwatches, ga-edegharị Wear OS.
Gbanwee iPhone gị na Game Boy na ikpe Wanle. Chọpụta ihe banyere nke mbụ a nke na - enyere aka ịgbanwe ekwentị gị ka ọ bụrụ ezigbo Game Boy nke na - arụ ọrụ.
Eziokwu gbara ume ma ọ bụ eziokwu dị adị bụ taa n'oge ntụgharị ahụ nke ga-aka akara ...
Ngwaọrụ jikwaa ndị enyemaka Amazon, gụnyere ndị ọkà okwu nwere ọgụgụ isi, amalitela ịkpa ọchị n'ihi enweghị ihe kpatara ya, na-achị ọchị na-enye nsogbu.
Ndị na-emeputa ihe na Spain, Energy Sistem, ewepụtala ọhaneze Energy Tower g2 Wood, ọkà okwu osisi nwere ikike ruru 120W na ọnụ ahịa dị oke ọnụ.
Iji mee mmemme mwepụta nke egwuregwu ọhụụ Far Cry 5, Trustmaster na-agbakwunye isi egwuregwu abụọ ọhụrụ Y-350CPX na Y-300CPX….
Na mgbakwunye na ụdị ọhụrụ nke Xperia XZ2 nke ụlọ ọrụ ewepụtara n'ụtụtụ a, ndị ...
Samsung ga-etinye ngwa ngwa Bixby dakọtara na nke mbụ nke afọ a, nke mere na Ntanetị nke Ihe bụ ihe karịrị akụkọ dị mfe dịka ọ dị ruo ugbu a.
Ọ bụrụ na anyị amatabeghị ihe ị ga-azụta maka onye ọlụlụ anyị maka ụbọchị Valentine, anyị ga-egosipụtakwa gị igwe eletrọnịkị kachasị mma iji soro onye anyị na ya nwere mmemme taa.
Ma ọ bụ na taa anyị nwere ọtụtụ ihe ngwọta iji mee ka ubi, ubi mkpụrụ osisi, ọnụ ụzọ ụlọ ma ọ bụ ...
Ndị uwe ojii China, n'ọchịchọ ha ijide ụmụ amaala ha ọchịchị oge niile, amalitela itinye usoro nnabata ihu na iko ndị uwe ojii.
Onyinye kacha mma Amazon na-enye maka taa (31-01-2018)
Ọzọ anyị na-egosi gị ihe kacha mma Amazon na-enye maka taa, ebe anyị nwere ike ịchọta site na ndị nlegharị anya na ekwentị.
Ihe oru ohuru nke Elon Musk's The Boring Company bu oku na-ere oku nke gha adi onu ahia $ 600 ma gha gha ahia a $ 600.
N'okpuru ebe anyị na-egosi gị onyinye ndị kachasị mkpa Amazon na-enye anyị ụbọchị niile.
Otu ọnwa karịa oge ezubere, Apple kwadoro mwepụta nke HomePod, ngwaọrụ nke na-enye anyị usoro nke ọghọm na ọghọm anyị na-egosi gị n'isiokwu a.
Ma ọ bụ na anyị nwere ụbọchị ole na ole na ozi ọma banyere ohere ụlọ ọrụ ga-eweta ihe ọhụrụ ụgbọ mmiri na ...
N'okpuru ebe anyị na-egosi gị ihe kacha mma Amazon na-enye maka taa, Jenụwarị 23, 2018, na-enye dị oke na oge na nkeji.
Companylọ ọrụ ụgbọ elu ahụ na-ekwu na ha jisiri ike belata ihe karịrị lita 600.000 mmanụ kwa afọ, na-ebelata ịdị arọ nke akwụkwọ akụkọ ọ na-enye n'ụgbọelu na ụgbọ elu ya niile.
Isiokwu oriọna na aka mmetụta na 256 agba n'ịgwa, Aukey LT-T6
Mgbe anyị chọrọ oriọna maka tebụl akwa anyị, tebụl ma ọ bụ ọbụlagodi iji mepụta ọnọdụ kwesịrị ekwesị n'ime ime ụlọ ahụ ...
Isiokwu a na-egosi gị nke bụ onyinye kachasị amasị gị site na Amazon maka taa, Jenụwarị 18, 2018, ụfọdụ onyinye ị na-agaghị enwe ike ịjụ ma ọ bụrụ na ị na-eche ha.
The Switzerland emeputa Tag Heuer ka ọkọnọ na Tag Heuer ejikọrọ Full Diamond, a nlereanya na integrates 589 diamonds gbasasịa gburugburu okpueze na eriri nke ngwaọrụ na onye price gbapụrụ karịa ọkara nke mmadụ.
Ndị a bụ ihe na-atọ ụtọ Amazon na-enye maka taa (16-01-2018)
Onyinye kachasị adọrọ mmasị nke taa Jenụwarị 16, 2018 na Amazon, ị ga-ahụ ha n’isiokwu a.
A na-ere oge elekere BLOCKS dị iche iche wee zigara ndị ọrụ na nkeji iri na ise nke 2018. Ọnụahịa ya na-amalite na euro 220
Companylọ ọrụ America Qualcomm egosila na CES nhazi ọhụụ maka ekweisi ikuku nke na-enye nnwere onwe okpukpu abụọ nke onye bu ya ụzọ.
Casio amalitela mbipụta pụrụ iche nke ama ama G-Shock nke gụnyere ihe ndị ọzọ Njikọ GPS yana nnwere onwe site na ìhè anyanwụ.
Kodak weputara onye na-egwuputa ihe Bitcoins nke ya. Chọpụta karịa gbasara mkpebi ụlọ ọrụ wepụtara ngwaahịa a nke na-ewepụta ọtụtụ nkwupụta.
Sony gara n'ihu na mmepe nke nkịta robot ha Aibo ma ugbu a ọ dị mma karịa karịa ụdị ...
Otu emechala ihe ngosi teknụzụ ndị ahịa kachasị ukwuu nke emere na otu afọ na Las na Las Vegas, oge eruola ka achikota
Byton bụ ụlọ ọrụ China nke batara na CES 2018. Na ibido, o gosiputara ọhụụ nke ụgbọ ala nke ọdịnihu.
Na-ekpuchi onwe anyị n'ime usoro nke CESS 2018 taa anyị ga-ekwu maka HTC Vive Pro ọhụrụ, iko maka eziokwu dị adị nke na-emeziwanye na obere nkọwa ndị ahụ obodo na-arịọ ogologo oge.
Afọ 2017 enyela anyị ọtụtụ ngwaọrụ, nke ọma na nke ọjọọ, mana n'isiokwu a, anyị ga-elekwasị anya naanị n'igosi ndị bụ ngwaọrụ kachasị mma kụrụ ahịa na 2017. know ma ha niile?
Firmlọ ọrụ Asia DJI, gosipụtara ụbọchị ole na ole tupu ememme CES, ọgbọ nke abụọ nke Osmo Mobile na ihe nchekwa ọhụrụ maka igwefoto na-enweghị atụ na nke a na-akpọ Ronin-S
Companylọ ọrụ Korea nke LG na-aga n'ihu iji ohere nke CES 2018 mee ihe, iji gosi TV nke anụ ọhịa 65, nke kwekọrọ na 4k dị ka a ga-asị na ọ bụ akwụkwọ akụkọ
LG kwụrụ ụgwọ LG ka gosipụtara na ahịa CES, ihe ngosi 4k nke na-enye anyị nju magnet nke ruru sentimita 150 ma dakọtara na teknụzụ HDR10.
Ọzọ ụmụ okorobịa si Lightinthebox tinyere n'aka anyị ọtụtụ ọnụọgụ maka oge yana nkeji ole ị na-agaghị echefu.
Ma ọ bụ na taa na mbata nke ikuku na-akwụ ụgwọ na ụdị Apple ọhụrụ, ihe ...
Amazon ereela ihe karịrị 5.000 ijeri ngwaahịa site na mmemme mbụ na 2017
Mụ okorobịa si Amazon ewepụtala ụfọdụ ọnụọgụ nke ụlọ ọrụ ahụ nwetara na 2017 niile n'ime na n'èzí mmemme PRIME
Ekele maka ngwa Samsung Copilot, ohere nke ịrahụ ụra na wiil ahụ na-ebelata ma ọ bụrụ na anyị nwere smartwatch dakọtara.
Ingtụleghachi 2017, taa anyị na-egosi gị nke bụ ngwaọrụ kacha njọ nke 2017, ụfọdụ ngwaọrụ ndị mechuru ọha na eze ihu
Garmin ka gosipụtara Vivofit 4, ọgbọ ọhụụ nke mgbaaka na-enye anyị ohere ịlele ọrụ anyị niile batrị ya dị afọ 1
Ọ dị ka ụbọchị anyị na-akwụ ụgwọ maka ire ere ngwaọrụ nke ...
Wherebanye ebe anyị ga-ekwu maka okpu egwuregwu Bluetooth kacha mma nke 2017, dị mma maka ndị egwuregwu niile na-eguzogide ịpụ n'emeghị egwu ha.
Ọ bụrụ na ịmabeghị nke kachasị mma ikuku okwu na-egbo gị mkpa gị, n'isiokwu a, ị ga-ajụ ajụjụ ọ bụla.
Anyị nwalere Mujjo, Uwe mkpuchi abụọ nke nwere agba abụọ wee gbakwunye koodu ntinye ego 10%
Ugbu a anyị nọ n'etiti mgbasa ozi ekeresimesi, kedu ụzọ ka mma karịa ịnwe echiche maka onyinye ma ọ bụ onyinye onwe na nke a ...
Google ebipụtala ndepụta nke smartwatches dabeere na android wear nke ga-enweta mmelite na gam akporo 8.0 Oreo. Anyị na-ahapụ gị ndepụta zuru ezu
Mgbasa ozi Samsung, #YaNoHayExcusas na-achọ ịkụziri ndị di na nwunye ka nkesa ọrụ ga-adị nhata n'etiti ndị nwoke na ndị nwanyị
Nommi karịrị WiFi rawụta: ọ nwere ike ịrụ ọrụ dị ka onye na-agbapụta ihe n'ụlọ ma ọ bụ chaja ikuku. Chọpụta uru ya niile
Ọzọ ụmụ okorobịa si Lightinthebox akwadebela ụfọdụ ọmarịcha onyinye ị ga-enye n'oge ekeresimesi a.
Chaja Aukey nwere ntinye 2 USB na Bank Power na USB C na ọdụ ụgbọ mmiri ọkụ nke 20.000 mAh
Ma ọ bụ na ịnwe ngwaọrụ abụọ na-akwụ ụgwọ n'otu oge bụ ihe karịa ka ọ dị na mbụ maka ...
DJI bụ onye isi ụlọ ọrụ na imepụta na ọrịre nke drones obodo na teknụzụ onyonyo ikuku….
Guysmụ okorobịa si Lightinthebox na-enye anyị ọnụ ọgụgụ buru ibu nke onyinye iji mee ememme Cyber ​​Monday, ụfọdụ onyinye pụrụ iche anyị na-agaghị echefu
Anyị na-enyocha chaja ikuku nke ụlọ ọrụ Holife QC 3.0
Anyị nwalere Qi Wireless Quick Charger 3.0 wireless chaja isi, nke ga - enyere anyị aka ịche ekwentị anyị n'ụzọ dị mfe, ...
N’isiokwu a anyị na-ewetara drones 3 iji kpuchie mkpa nke onye ọrụ ọ bụla chọrọ ịmalite n’ụwa a magburu onwe ya.
N’ikpeazụ ụbọchị nke ọtụtụ n’ime anyị chere abịarutela, iji megharịa ngwaọrụ ọzọ anyị nwere n’ụlọ, ugbu a ...
Themụ okorobịa sitere na Lightintebox na-enye anyị ego dị oke mkpa iji mee emume Black Friday na gam akporo smartphones, kọmputa na TV Boxes
Ma ọ bụ na teknụzụ abụghị mgbe niile azịza ya dị ka egosiri n'ọtụtụ oge ị ga - ...
N'isiokwu a, anyị na-egosi gị ihe ngosi kachasị mma anyị nwere ike ịchọta taa na Amazon
You nwere mmasị na nhazi nke Tesla Superchargers? Ọfọn ugbu a ị nwere ike ịnwe otu iji bulie n'ụlọ gị na batrị obere Tesla
Obiọma abụrụla maka afọ 10. Anyị na-enyocha akụkọ ntolite ya, ụdị ndị dịnụ, usoro okike ya na nke bụ akwụkwọ kachasị ebudata na akụkọ ntolite
A na-akpọ ọfụfụ ọhụụ ọhụụ nke HTC maka ahịa ndị China ka HTC Vive Focus ma ọ bụ ọkara nke HTC's Vive na Daydream nke Google.
Choputa TomTop kacha mma maka Black Friday. Nhọrọ anyị nke ngwaahịa dị mma na ọnụahịa kacha mma Zụta ugbu a!
Gearbest nwere ọtụtụ onyinye enyere edobere maka 11/11, a makwaara dị ka Singles Day na China.
O doro anya na O zoro n'ezie ka ọ bụrụ ezigbo asọmpi maka ụdị omume wireless na nke onwe ha na ntị ntị.
Ihe ọhụrụ Nook GlowLight 3 biara na ihuenyo ink
Ma ọ bụ na ezinụlọ nke akwụkwọ elektrọnik NooK nke Barnes & Noble, nwere ogologo oge na-enweghị ihe ijuanya ndị hụrụ ...
Companylọ ọrụ taa kwupụtara na ọ na-agbasawanye nnweta ngwaọrụ a na mba 29 ọhụrụ na Europe, yana n'etiti ...
Ọzọkwa Apple Watch Series 3 na-enye ndị ọrụ nsogbu nsogbu. Oge nsogbu a na-emetụta ihuenyo.
Companylọ ọrụ Jeff Bezos ka kwuputara na n'ime ọnwa ole na ole, Kindle Oasis ga-enweta mmelite nke ga - eme ka ọ dakọtara na Audible
Feiyu WG2, ihe mgbaka maka igwefoto egwuregwu na-enweghị mmiri
Feiyu WG2 bụ stabilizer ma ọ bụ gimbal maka ese foto dị ka GoPro na Xiaomi. Ngwaahịa a anaghị egbochi mmiri
Igwefoto ohuru nke Amazon, Amazon Cloud Cam, na-enye anyị mkpebi HD zuru oke na igwe ojii na ndekọ igwe na ngagharị na ọnụahịa dị egwu.
Ha na-anwale ikwesị ntụkwasị obi nke netwọk fiber optic iji chọpụta ala ọma jijiji
N'ihi ihe mmetụta nke Mahadum Stanford mere, ọ ga-ekwe omume ijikọ ha na fiber optics iji chọpụta ọ bụla ala
Agbanyeghị na ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ Korea ewepụtala Samsung 360 Round, ngwaọrụ nwere igwefoto 17 ka ịdekọ na ogo 360
Romeo Power Saber bụ batrị dị na mpụga nke na-enye gị ohere ịkwanye ụdị ngwa elektrọnik karịa otu oge. Ndepụta ahụ gụnyere laptọọpụ
Themụ okorobịa si Fosil emeela ngwa ngwa ha ọzọ nke smartwatches ngwakọ, na-eweta ụdị abụọ maka ụmụ nwanyị.
Google na-adaba na ihe na-erughị ọkara ọnụahịa nke USB-C ka nkwụnye nkwụnye ọkụ
Google agbadata, n'agwaghị onye ọ bụla, ọnụahịa nke USB-C ka nkwụnye nkwụnye, na-etinye ya ihe na-erughị ọkara ọnụahịa mbụ ya.
Bolt B80 site na Silicon Power bụ diski nchekwa SSD nke dị na mpụga IP68 asambodo maka mmiri na uzuzu uzuzu ya na nhazi mara mma ma buru ibu
N'ime ahụike, anyị na-achọta ezigbo igwe amamịghe dabara na smartphones anyị. Ọ na-adịwanye ọtụtụ ...
Amazon na-ebupụta dongle nke ị nwere ike iji chaji iPhone gị ma n'otu oge ahụ nwee ike ịgba ya. Ọ bụ ngwa ọhụrụ iji jikọọ n'ọdụ ụgbọ mmiri ọkụ
Akụkụ gam akporo Wear na-apụ n'anya ụlọ ahịa Google
N'oge na-adịghị anya mgbe ewebata Pixel 2 ọhụrụ ahụ, ụlọ ọrụ nke Mountain View wepụrụ ihe niile gbasara smartwatches na ụlọ ahịa ya
Smartee Pop na Smartee Sport bụ ụzọ abụọ na-atọ ụtọ nke ukwuu nwere njiri mara dị egwu, ka anyị matakwuo ha nke ọma.
Na ụbọchị ole na ole, ọgbọ nke abụọ nke PlayStation VR nke Sony ga-abata na Japan, iko ndị ga-ewe izu ole na ole iji dịrị n'ụwa niile.
Ngwa akụrụngwa Belkin na-ebupụta nkwụnye ọkụ ọkụ abụọ na jaak 3,5 mm maka iPhone akpọ RockStar yana ọnụahịa na-enweghị mmasị.
De n’adwene sii saa asɛm no so. Taa, anyị ga-ekwu maka ngwaahịa dị iche iche nke ...
Ọ bụrụ na ị na-eche echiche ịzụta igwe eletrik, n'isiokwu a ị ga-achọta ozi niile ịchọrọ, yana ụdị kachasị mma.
Parrot Mambo bụ ezigbo obere mmiri maka ndị mbido n'ihi ịdị mfe nke njikwa. Gbọmgbọm na clamps ndị a gụnyere n'ime igbe ahụ na-eme ya nnukwu obi ụtọ.
Ndị ọrụ Nike egosila uwe elu nwere mgbawa NFC nke ga-enye anyị ohere ịnweta ozi otu anyị ọsọ ọsọ na ozugbo.
Ihe ohuru GoPro Hero 6 ga - enyere anyị aka ịdekọ vidiyo na 4k na 60 fps
Godị GoPro na-esote, Hero 6, ga-enye anyị ohere ịdekọ vidiyo na ogo 4k na 60 fps, ịbụ igwefoto egwuregwu izizi na-enye ya ohere
Jaybird na-ewebata ọsọ, ekweisi ekweghị ekwe ekwe ekwe ha
Jaybird, ụlọ ọrụ ndị Logitech nwere na-arụpụta ekweisi ikuku dị elu, na-ewetara anyị ọsọ, ekweisi ekweghị ekwe standalone ha.
AirPower, isi ihe na-eme iPhone, Airpods na Apple Watch na-enweghị eriri
AirPower bụ ihe ọhụrụ Apple na-akwụ ụgwọ ga-eme ka kọmputa gị dị ike. Na mgbakwunye, ịnwere ike idowe ndị otu 3 iji kwado
Firmlọ ọrụ okomoko Michael Kors emeela ka ọ dị iche iche na elekere anya, na-ebupụta ụdị ọhụụ abụọ: Sofie na Grayson.
Onye oru agha ochie John Dere kwuputara zụta ụlọ ọrụ ọgụgụ isi iji nyere ndị ọrụ ugbo aka ịchọpụta ihe ọkụkụ ha ngwa ngwa.
Ndị a bụ ngwaọrụ kachasị njọ. Ha nwara ma daa. The iPad PRO ma ọ bụ Samsung Galaxy Note 7 bụ ụfọdụ, ị maara ndị ọzọ? Gịnị mere na ha ada?
Firmlọ ọrụ Razer gosipụtara Basilisk, òké na-ejikọta ihe na-akpali akpali nke ga-eme ka anyị nwee obi ụtọ na FPS
Ihe nlere anya nke ngwa nju oyi nke Panasonic gosiputara na IFA bu ezigbo echiche ma obughi maka ibi ndu ndu
You chọrọ ikwu na nkwado ndabere na mpaghara gị iPhone n'otu oge na-enweghị na-eme iju ihe? Isi SanDisk iXpand bụ azịza gị
Acer na-enye ihe ngosi abụọ maka ụlọ na ndị ọkachamara
Companylọ ọrụ Taiwanese bụ Acer egosiputa ọhụụ ọhụrụ abụọ maka ụlọ na gburugburu ọkachamara, nwere àgwà yiri ya
Nkeji ole na ole gara aga, Samsung gosipụtara n'ihu ọha Gear Sport na IFA 2017, smartwatch na-eche echiche na maka ndị egwuregwu.
A na-ahụ ọhụụ ọhụrụ Gear tupu oge eruo, na-akwado nkwenye doro anya nke Samsung na smartwatches.
Guysmụ okorobịa nọ na Fitbit egosila ọgbọ nke abụọ nke Aira, otu n'ime akpịrịkpa ziri ezi na ahịa.
Sony na-ekwuputa nkwalite atụmatụ na ọdịda ọnụ maka ngwugwu PlayStation VR, nyiwe PlayStation 4 nke eziokwu
A na-enyefe iwu Sushi n'ịntanetị na Iceland na nkeji 4 yana drone
Na Iceland anyị nwere ike ịchọta obodo dị iche iche ahọrọla iji wepụta nri ha n'ụlọ n'ụlọ.
Septemba 12 nwere ike ịbụ ụbọchị Apple họọrọ iji chee iPhone 8
Themụ okorobịa si Cupertino nwere ike iweta iPhone 8 ọhụrụ na Septemba 12, dị ka weebụsaịtị French Mac4Ever si kwuo.
Shonin bụ igwefoto igwe eji arụ ọrụ nke nwere, site n’itinye aka n’otu aka wee jikọta ya na uwe, nwere ike ịdekọ ma chekwaa ihe niile na - eme tupu oghere gị
Ọ dị ka ụmụ okorobịa si Cupertino enwetala nghọta ya ma malite n'ezie igbutu oge mbufe AirPods.
Ihuenyo nke na-edozi onwe ya nwere ike ịbụ eziokwu n'oge na-adịghị anya n'ihi Motorola
Motorola ka debara aha na patent nke anyị nwere ike ịhụ etu enwere ike idozi ihuenyo nke ama na akpaghị aka site na itinye okpomọkụ.
Thlọ ụlọ ifo nke Bekee ga-apụ n'anya na afọ 5 sochirinụ.
Samsung enweela onye mmekọ maka Samsung Galaxy Note 8 na August 23: Samsung Gear Fit2 Pro, nke ọzọ wearable
Ihe ọzọ Fitbit na-eyi eyi, na-egosi na ọ nwere ike ịlele ogo ikuku oxygen n'ọbara, ịbụ smartwatch mbụ nke mere.
Achọpụtala ngwaahịa Garmin ọzọ elebara anya na nlekota ọrụ. Nke a bụ Garmin VivoActive 3
Samsung ewebatala ekweisi egwuregwu ọhụrụ dabara na enyemaka Bixby. Ọ bụ Samsung Samsung Flex ọhụrụ
Apple nwere ike ịmalite Apple Watch ọzọ nwere onwe ya mgbe afọ a gasịrị. Nke ahụ bụ, a nlereanya na-adịghị mkpa ka iPhone na-arụ ọrụ
Nzọụkwụ Xiaomi na onye osooso na karịrị Apple na Fitbit ịbụ onye nrụpụta izizi nke ngwaọrụ wearable n'ụwa
Ndị Cupertino ewepụrụ iPod Nano na iPod Shuffle na ire ere, hapụ iPod naanị dị ka ihe ntinye
Nke a Thomson mbinye aka kiiboodu na-enye anyị ohere ijikwa ngwaọrụ niile dị n'ụlọ anyị dị ka TV, DVD player, kọmputa, na stereo.
Moto 360 Igwefoto igwefoto maka Moto Z bụzi gọọmentị
Firmlọ ọrụ China bụ Motorola gosipụtara Z2 Force Motor ọhụrụ ma na-ewere ohere iji gosipụta Moto 360 Igwefoto ọhụrụ, ụdị ọhụụ maka ọkwa Z
Lyric W1 bụ ngwaọrụ nwere ọgụgụ isi nke ga-agwa anyị ama ma ọ bụrụ na mmiri agbapụ ma ọ bụ na enwere ihe egwu nke ọkpọkọ oyi.
Nzọụkwụ mbụ nke Microsoft na ịntanetị nke ihe dị na GLAS, thermostat mara mma nke nwere atụmatụ dị egwu.
Huawei na-ekpughere Huawei Band 2 na 2 Pro ọla aka ọhụrụ, ịlaghachi n'ụdị Fitbit kachasị ọcha
Taa, anyị na-enyocha Kobo Aura H2O Edition nke 2 nke ọma, nke dị ka otu n'ime ndị kacha mma eReaders na ahịa taa.
Ike gwụrụ nke na-achọ free TomTom map? N'ebe a, anyị na-enye gị map Tomtom niile n'efu ka ị nwee ike ịwụnye ha na nchọgharị GPS gị n'ụzọ dị mfe.
Dabere na Bloomberg, Oculus virtual reality glasses ga-anata obere nwanne nwere ego nwere oke ga-adị ihe dịka $ 200.
Louis vuitton egosila smartwatch ọhụrụ ya nke ọ kpọrọ Tambour Horizon na nke a ga-akwụ ụgwọ ya na euro 2.450.
Thgha IBM Model F na-aga ire ere ọzọ
IBM Model F, a n'ibu keyboard si eighties na-eme na-adị mfe ịhụ ka na-arụ ọrụ, anwansi nke tupu dijitalụ afọ.
Ọnụ ọgụgụ nke Moto Mods ga-agbasa obere oge na mbata igwefoto nke ga-ekwe ka ịdekọ vidiyo na ogo 360
Akwụkwọ ozi dijitalụ obi ụtọ nke kpatara ọtụtụ esemokwu, na-alaghachi n'ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ, na-agbakwunye ngwaahịa na ndepụta ahụ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịtụgharị TV gị na TV Smart, ị ga - ahụ nke kachasị mma iji nweta ọtụtụ TV gị.
Spinners, ngwaọrụ ndị ụfọdụ hụrụ n'anya ma ndị ọzọ kpọrọ asị, amalitela ịgbakwunye mgbakwunye ndị chọrọ batrị, ma bido ịgba ọkụ
Bluespin bụ spinner ọhụrụ nke na-enye anyị ohere ijikwa ọsọ na ọnụọgụ laps na ama, mana ọ na-enye anyị ohere igwu egwu n'ịntanetị
Companylọ ọrụ ndị Japan bụ Sony ka kwupụtara na ọ ga-emepe ụlọ ọrụ ọhụrụ iji rara onwe ha nye maka imepụta vinyl records.
Xiaomi na-enye ihe ngosi laser maka ihe na-erughị dollar 1500
Firmlọ ọrụ China bụ Xiaomi enyefeela Mi Laser Projector, ihe ngosi laser nwere mkpebi nke 150 sentimita asatọ.
A hụla Samsung SmartCam tupu ya egosipụta ihe ngosi ya, na-egosi njirimara ọrụ ya na-atọ ụtọ.
Dell Avanced 4k projector na-enye anyị mkpebi 4k na nha atụmatụ nke 100 sentimita asatọ, na ọnụahịa nke $ 5999.
Igodo ọhụụ nke Microsoft webatara a na-akpọ kiiboodu Ọgbara ọhụrụ ma jikọtara ihe mmetụta mkpịsị aka.
Sony FES Watch U bụ elektrọnik ink smartwatch nke na-agbatị n'ime eriri ahụ na-enye ọdịdị nke otu mpempe ọkụ.
GObyLIVI amalitela oru ohuru nke na-enye anyi ngwa ahia bara uru ma di mfe nke ga-enye ọgụgụ isi igwe kwụ otu ebe na ọgba tum tum anyị
A nkuzi banyere otu esi emegharị Apple Watch na ntọala ụlọ ọrụ site na nche ma ọ bụ iPhone ọ bụrụ na ịchefuru koodu mkpọghe.